WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood),waxaa qoray.Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)
Home » Qormooyinka » WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood),waxaa qoray.Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)	WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood),waxaa qoray.Dr.Xuseen Sh.Axmed (kaddare)
18/04/2017	257 Views Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. wuxuu ahaa Laashin dhaqan-ruug ah oo Suugaanta Soomaalida noocyadeeda kala geddisan curiya misana Qoraa ahaa.
Qeybta 21-aad Warsame markuu gabaygan soo daliishanayay wuxuu maanka ku hayay saddexda bayd oo gabayga ugu horreysa, kuwaasoo guud ahaan tilmaamaya inaan dadka qaar hadalku wax u tarin sida uusan durdurku doog uga soo saari karin hadduu dhax dul maro.
Nin waayeelka magaalo ka mid ahaa, maantoo dhanna aamusnaa, ayaa ka baqay inay sheekadu xumaato. Wuxuu arkay rag aad u buun buuninaya waxyaalaha muranka dhaliyey. Wuxuu kaloo ogaa in haddii laysu caroodo ay sheekada murtida lihi joogsanayso, maalin walba aan layska helayn maqaawiirta meesha ku kulantay. Ninkii wuxuu goostay inuu sheekada beddelo oo meel kaloo kaftankeedu xiisa leeyahay dadka kusii jeediyo, wuxuuna ku billaabay “Waasugow, waxaad nooga warrantaa reer miyigu qabyaaladdi mayska dhaafeen, iskoodse wax ma u qabsadaan oo ma yihiin dad usoo jeeda horukaca ama is beddel nololeed”?.
Markii lasoo jeediyey su’aashaa ka baxsan sheekadii hore ayaa dadkii wada aamusay. Taasu waxay ka dhalatay in markii hore qof waliba ka fekarayey wixii uu ka dhihi lahaa doodda markaa socotay, qaarna uu kaba faalloonayey wixii horey loo yiri. waasuge markuu xoogaa aamusnaa ayuu su’aashii ka jawaabay oo yiri “ inkastoo aan ku kala noolnahay UDUB ( Reer miyiga inta ku hoyata aqallada udbaha ka dhisan) iyo AFAAF ( Reer magaal: inta ku hoyata aqallada albaabka leh), haddana waad ogsoontihiin oo reer miyiga iyo reer magaalka waxaa laga wada xukumaa meel kaliya. Tan labaad waad ogtihiin oo dadweynaha soomaaliyeed oo dhan ayey Dowladdu qabyaaladda ka xaaraantimeysay, iyadoo aan loo kala soocin reer miyi iyo reer magaal. Waxaa kaloo la wada ogsoonyahay in dadweynaha soomaaliyeed uu si wanaagsan u aqbalay taladaas.”
Waasuge wuxuu intaas raaciyey “Dowlad waxaa ugu wanaagsan tan ammarkeeda si caddaan ah u fulisa”, wuxuuna ummuurtaas u cuskaday oo soo daliishaday Maahmaahdii ahayd: Saddex waxyaalood dad looguma taliyo;
Gar qalloocan, guddoon jilicsan iyo gacan guran.
Waxaa hadalkii qaatay Warsame oo uu markii hore afhaysad ku reebay murankii ka dhashay gabayguu u daliishaday inaan reer magaalka hadal looga taag helin, wuxuuna ku billaabay “ idinka ayaa reer magaalow nooga fara dhuudhuuban fidinta qabyaaladda, welina kasii daba hanqal taagaya. Idinka ayaa afkana ka dhowranaya, ficil ahaanna wax ugu maamulaya, annagu waxaan nahay dad weli xusuusanaya dhibaatooyinkii ay qabyaaladdu nasoo marsiisay. Waxaan maankeyga marna ka go’ayn dadkii sida sahsaln ugu qur bixi jiray dagaal si macna la’aan ah uga dhashay, Beer, Daaq iyo Biyo, kuwaasoo ay qolaba qolo u sheeganeysay. Waxaa kaloo aan cidna ka qarsoonayn sahalkii mar kaliya aan dhibaatadaas uga baxnay iyo sidii aan uga raysannay. Sideedana qiima darrada qabyaaladda horay ayaan uga maahmaahnay oo waxaanba niraa:
“Ninkii xigaalo kuu sheegta
Xawaalaha (Xabaalaha) ayaa la tusaa
Ninkii xoolo kuu sheegtana hooskiisa.” La soco Qeybta 22-aad, Berri haddii Alle idmo. WAXAA QORAY:
Previous: Degdeg- Hoobiyayaal xooggan oo Xamar laga maqlayo
Next: FIIRSO SAWIRRO: Madaxweynaha Buntilan oo si diirran loogu soo dhaweeyay Gaalkacayo